Chirevo pamusoro peMoabhi (1-9)
15 Mutongo weMoabhi:+ Nekuti yaparadzwa neusiku humwe chete,Ari+ yeMoabhi yanyararidzwa. Nekuti yaparadzwa neusiku humwe chete,Kiri+ yeMoabhi yanyararidzwa. 2 Iye akwidza kuImba* uye kuDhibhoni,+Kunzvimbo dzakakwirira kunochema. Moabhi inoungudza pamusoro peNebho+ nepamusoro peMedhebha.+ Misoro yese yagerwa muparavara,+ ndebvu dzese dzachekererwa.+ 3 Vakapfeka masaga vari mumigwagwa yayo. Vese vanoridza mhere vari pamatenga edzimba dzavo uye mumisika yavo;Vanoburuka vachisvimha misodzi.+ 4 Maguta eHeshbhoni neEreyare+ anoshevedzera;Inzwi rawo rinonzwika kusvikira kuJahazi.+ Ndokusaka varume veMoabhi vane zvombo vachiramba vachishevedzera. Iye ari kudedera.* 5 Mwoyo wangu unoshevedzera pamusoro peMoabhi. Vanhu vayo vari kutiza vasvika kuZoari+ neEgrati-sherishiya.+ Vanochema sezvavanokwidza pamukwidza weRuhiti;Vanochema nezvenjodzi yacho sezvavanoenda kuHoronaimu.+ 6 Nekuti mvura yeNimurimu yaoma;Uswa hwaoma,Uswa hwapera uye hapasisina chakasvibirira. 7 Ndokusaka vachitakura zvasara munochengeterwa zvinhu zvavo uye papfuma yavo;Vari kuyambuka bani remiti* yemishambangwena. 8 Nekuti kuchema kwacho kunoita maungira munharaunda yese yeMoabhi.+ Kuungudza kwacho kunosvika kuEgraimu;Kuungudza kwacho kunosvika kuBheeri-erimu. 9 Nekuti mvura yepanzvimbo inonzi Dhimoni yazara ropa,Uye ndine zvimwe zvekuunza paDhimoni: Shumba pane vaya vanopukunyuka veMoabhiUye pane vaya vasara munyika yacho.+
^ Kana kuti “Mweya wake uri kudedera.”
^ Kana kuti “rwizi rwemiti.”